OGOLOGO IHE NTINYE NA IHE NCHỌGHARỊ - ESI MEE - 2019
Isi Esi mee
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ejiri ihe dị na peeji nke dị na peeji nke
A9CAD bụ usoro mmemme n'efu. Anyị nwere ike ikwu na nke a bụ ụdị Paint n'etiti ngwa ndị dị otú ahụ. Ihe omume a dị nnọọ mfe ma o yighị ka ọ ga-eju onye ọ bụla anya na ike ya, mana n'aka nke ọzọ ọ dị mfe nghọta.
Ngwa ahụ kwesịrị ekwesị maka ndị mmadụ na-ebute ụzọ mbụ ha na-ese. Ndị na-amalite amaliteghị ịnweta ọrụ ntinye mgbagwoju anya ịrụ ọrụ dị mfe. Ma ka oge na-aga, ọ ka dị mma ka ị gbanwee gaa na mmemme dị oke njọ dika AutoCAD ma ọ bụ KOMPAS-3D.
A9CAD kwadebere ya na interface dị mfe. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ njikwa ihe omume niile dị na windo.
Anyị na-akwado ịhụ: Ihe ndị ọzọ na-ese ihe na kọmputa
A9CAD nwere obere ngwaọrụ, nke zuru ezu ịmepụta eserese dị mfe. Maka ọkachamara ọkachamara, ọ ka mma ịhọrọ AutoCAD, ebe ọ nwere ọrụ ndị na-enye ohere ịbelata oge eji arụ ọrụ.
Ọzọkwa, ọ bụ ezie na a na-ekwu na usoro ihe a na-arụ ọrụ na DWG na DXF formats (nke bụ ụkpụrụ maka ịbịaru na kọmpụta), n'ezie A9CAD anaghị emeghe faịlụ ndị e kere na usoro ọzọ.
A9CAD na-enye gị ohere ibipụta ihe osise.
1. Ọdịdị dị mma;
2. Ihe omume ahụ bụ n'efu.
Ọghọm nke A9CAD
1. Enweghị atụmatụ ndị ọzọ;
2. Ihe omume ahụ adịghị amata faịlụ ndị e kere na ngwa ndị ọzọ;
3. Enweghị nsụgharị n'asụsụ Russian.
4. Nkwalite na nkwado akwadoro oge, ebe ọrụ ahụ anaghị arụ ọrụ.
A9CAD bara uru maka ndị na-amalite ọrụ na ịbịaru. Dika ekwuru ya, emesia ọ ka mma igbanwe gaa na ozo, usoro mmemme ndi ozo, dika KOMPAS-3D.
Freecad QCAD ABViewer KOMPAS-3D
A9CAD bụ usoro CAD abụọ dị iche iche maka ịdere eserese na DWG na DXF usoro, tinyere mgbanwe ha.
Onye Mmepụta: A9Tech
Hola VPN tinye-na maka Mozilla Firefox nchọgharị
Nchọpụta nsogbu Windows Update Issues
Zie ezighị ezi 0xc0000225 mgbe ị na-agbanye Windows 10
Otu esi eji CPU-Z
Na Windows 10, ọ ga-ekwe omume ịgbanwe nhazi ihuenyo ahụ. Enwere ike ime nke a site na iji "Ogwe njikwa", interface nke onye ntanetị ma ọ bụ jiri ụzọ mkpirisi keyboard. Isiokwu a ga-akọwa ụzọ niile dịnụ. Anyị na-agbanye ihuenyo na Windows 10 Ọtụtụ mgbe, onye ọrụ ahụ nwere ike ịgbanwuo ihe oyiyi ahụ, ma ọ bụ, ọzọ, ị nwere ike ime ya na nzube. GụKwuo
Esi gbanyụọ ngosipụta nke foto na Mozilla Firefox nchọgharị
Mmemme maka ịchọta ihe nlereanya nke kaadị vidiyo
https://termotools.com ig.termotools.com © Esi mee 2019